Ngoku ikhona inguqulelo entsha ye-iMovie, 10.1.6 | Ndisuka mac
Inguqulelo entsha ye-iMovie ngoku iyafumaneka, 10.1.6
Ngokuqinisekileyo kufuneka sikhankanye ingxelo entsha ekhutshwe namhlanje yiApple yesicelo sokuhlela ividiyo, iMovie. Ngeli xesha kubonakala ngathi sinotshintsho olukhulu ngokubhekisele ekusebenzeni, ukhetho okanye izinto ezinje, kodwa uphuculo olunomdla olongezelelekileyo longezwa kwisicelo. Imalunga nokuqhubeka nokuphucula esi sixhobo sokuhlela ividiyo silungiselelwe yiApple kwaye kule meko kukho Ukulungiswa kwe-bug kunye nokuphuculwa kozinzo ngokuthe ngqo kumathala eencwadi adalwe ngeenguqulelo zangaphambili zeMovie.
Ukongeza kulungiso kumathala eencwadi, sifumene isisombululo sengxaki esinokunciphisa ivolumu yeziqeshana emva kotshintsho kwaye kubonakala ngathi ibicaphukisa kakhulu abasebenzisi, ke iingxelo eziya kuApple zisebenzile kwaye le Inguqulelo entsha ye-iMovie 10.1.6 isonjululwe. Ngokomgaqo, akukho lunye uphuculo kwisicelo kwaye akukho zindaba malunga nokusebenza okanye izixhobo zokuhlela.
Njengamaxesha onke, ukuba ungumsebenzisi we-iMovie, sicebisa ukuba sihlaziye usetyenziso ngokukhawuleza, ngale ndlela uya kuziphepha iingxaki nokuba khange uziqaphele. Esi sicelo kunye nezinye iWork zikhululekile simahla kuye wonke umntu kangangenyanga, kwaye iWork, iMovie kunye neGarageBand bemahala kubo bonke abo basebenzisi abathenga iMac entsha ukusukela phakathi ku-2013 ukubheka phambili, kodwa abanye abasebenzisi ababenama-Mac amadala ' Ndinesithembiso. UApple wongeze zonke iiMac kuluhlu ukuze ukhuphelo lwe-iMovie, amaPhepha, amanani, njl njl. simahla kuwo wonke umntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Inguqulelo entsha ye-iMovie ngoku iyafumaneka, 10.1.6
I-Final Cut Pro ihlaziywa ngokulungisa uzinzo kunye neempazamo zokusebenza ezahlukeneyo
Icandelo lezipapasho ezisemthethweni zika-Apple libizwa ngokuba ligumbi leendaba